URhulumente uyazama ukucoca indawo yeBhomu yeNyukliya yokuqala
Kwiminyaka emininzi edlulileyo, ingoma ethandwayo yelizwe ithethe "ukwenza into engcono kwiimeko ezimbi," into eninzi kakhulu abantu abasondeleyo kwimveliso yebhomu ye-nyukliya eyenziwa yiNkqubela Yehlabathi II.
Ngowe-1943, malunga nabantu abayi-1,200 bahlala ecaleni loMlambo wase-Columbia kwimimandla yasefama yaseRashington esezantsi e-Washington yaseRichland, i-White Bluffs ne-Hanford. Ngamhlanje, le ndawo yeThathu-mizi ihlala kwabangaphezu kwama-120,000 abantu, ininzi yabo iyakuthi iphile, isebenze, kwaye ichithe imali kwenye indawo akuyiyo loo nto igosa likaRhulumente elivunyelwe ukuqokelela kwi-560 square kilometer yaseHanford Site ukususela ngo-1943 ukuya ku-1991 , kuquka:
Izigidi ezingama-56 zezigulane zenyukliya ezinokutsha ezigcinwe kwii-177 phantsi komhlaba, apho okungenani ku-68 kuvuza;
Amathani angama-2,300 asetyenziswe amandla enyukliya ahleliyo - kodwa ngamanye amaxesha ahlahlela ukusuka - amachibi amabini angamaqhekeza angamawaka ambalwa ukusuka ku-Columbia River;
Iikhilomitha ezili-120 zeemitha eziphantsi komhlaba; kwaye
25 tons of plutonium ebulalayo ekufuneka ilahlwe kwaye igcinwe phantsi kwesilindi esilungele rhoqo.
Yaye yonke into ehlala kwiHanford Site namhlanje, nangona iinzame zeSebe laseMelika laseMelika (i-DOE) ukuba zenze iprojekthi yokucoca ngokusingqongileyo kwimbali.
Imfutshane kaHanford History
NgeKrisimesi ka-1942, kude neHanford yokulala, iMfazwe Yehlabathi II yayigaya. U-Enrico Fermi kunye neqela lakhe bagqiba ukuphendulwa kwekhamyana yokuqala yehlabathi, kwaye kwenziwe isigqibo sokwakha ibhomu ye-athomu njengesiponisi sokuphelisa imfazwe neJapan. Umgudu ophezulu wecandelo wathatha igama elithi " iManhattan Project ."
NgoJanuwari ka-1943, iManhattan Project yaqhutyelwa eHanford, e-Oak Ridge eTennessee, naseLos Alamos, eNew Mexico. U-Hanford wakhethwa njengendawo apho beza kwenza iputonium, ukuveliswa okubulalayo kwinkqubo yokuphendula iokhilikliya kunye nesithako esisisiseko sebhomu le-athomu.
Kwiinyanga ezili-13 nje kamva, i-reactor yokuqala yaseHanford yaya kwi-intanethi.
Kwaye ukuphela kweMfazwe Yehlabathi II kuya kulandela. Kodwa, loo nto yayikude ekupheleni kweHanford Site, ngenxa yeMfazwe yeCold.
UHanford Ulwa neMfazwe Yomlomo
Iminyaka elandelayo emva kokuphela kweMfazwe Yehlabathi II yabangela ukungonakaliswa kobudlelwane phakathi kwe-US kunye neSoviet Union. Ngowe-1949, iiSoviets zavavanya ibhomu yazo yokuqala ye-athomu kunye nomncintiswano wezixhobo zenyukliya -iMfazwe yamaCold - yaqala. Esikhundleni sokuphulukisa okukhoyo, i-reactors ezintsha ezisibhozo zakhiwe eHanford.
Ukususela ngo-1956 ukuya ku-1963, ukuveliswa kwe-plutonium yaseHanford kwafikelela kwinqanaba layo. Izinto zayikrakra. Umkhokeli waseRussia uNikita Khrushchev, ngohambo lwango-1959, watshela abantu baseMerika ukuba, "Abazukulwana bakho baya kuhlala phantsi kobukhomisi." Xa kwavela imikhosi yaseRussia eCuba ngo-1962, kwaye ihlabathi lafika phakathi kwemizuzu yeemfazwe zenukliya, iMelika yabuyisa kwakhona imizamo yokukhusela . Ukususela ngo-1960 ukuya ku-1964, i-arsenal yethu yeenkliya iphindwe kabini, kwaye i-reactors yaseHanford yahlaziya imini nobusuku.
Ekugqibeleni, ngasekupheleni kowe-1964, uMongameli uLyndon Johnson wanquma ukuba isidingo sethu seplonioni sehlile kwaye salela bonke ngaphandle kwe-Hanford yokumisa. Ukususela ngo-1964 ukuya ku-1971 abasibhozo abasi-9 abasabelayo bevaliwe ngokukhawuleza kwaye balungiselelwe ukuhlaziywa nokuhlaziywa. I-reactor yashiya yaguqulwa ukuba ivelise umbane, kunye ne-plutonium.
Ngowe-1972, i-DOE yongeze uphando lwe-atomic yamandla kunye nophuhliso kwi-Hanford Site mission.
Hanford Ekubeni iMfazwe Yengqungquthela
Ngowe-1990, uMikhail Gorbachev, uMongameli waseSoviet, waphakamisa uxhulumano oluphuculweyo phakathi kwamandla amakhulu kwaye wanciphisa kakhulu intuthuko yezandla zaseRussia. Ukuwa kokuthula koBukumkani baseBerlin kwalandelwa kungekudala, kwaye ngoSeptemba 27, 1991, i-US Congress yavakalisa ngokusemthethweni ukuphela kweMfazwe yeCold. Akukho phutonium enxulumene nokukhusela iza kuveliswa eHanford.
Ngethuba leminyaka yokuvelisa imveliso yalo, iSanford yaseSanford yayinobungozi obukhuselekileyo emkhosini kwaye ayizange iphinde ilawulwe ngongamela ngaphandle. Ngenxa yeendlela ezingafanelekanga zokulahla, njengokulahla ama-440 ibhiliyoni ezigidi zamanzi omsakazo ngqo kumhlaba, iikhilomitha ezili-650 zeHanford zihlala zibhekwa njengenye yezona ndawo zinobuhlungu emhlabeni jikelele.
Isebe leMandla laseMelika liphethe imisebenzi yaseHanford evela kwiKhomishoni yamandla e-Atomic Energy, ngo-1977 kunye neenjongo ezintathu eziphambili njengenxalenye yeSicwangciso soCwangciso:
Yicoca! I-Environmental Mission: I-DOE iyaqaphela ukuba uHanford akayi kuba "njengangaphambili" ngeenkulungwane, ukuba ngaba. Kodwa, baye bamisela iinjongo zesikhashana kunye nexesha elide ukwenzela ukwanelisa amaqela achaphazelekayo;
Hayi kwakhona ngonaphakade! I-Science & Technology Mission: I-DOE, kunye nabakontraki babucala bavelisa iteknoloji kwiindawo ezahlukeneyo ezinxulumene namandla ahlanzekileyo. Uninzi lweendlela zokuthintela nokukhusela iindlela zokusingqongileyo ezisetyenziswa namhlanje zivela eHanford; kwaye
Ukuxhasa abantu! Isivumelwano soMbutho weThathu: Kususela ekuqaleni kwexesha likaHanford lokubuyiselwa, i-DOE isebenze ukwakha nokwahlukana koqoqosho lwendawo, ngelixa likhuthaza ukubandakanyeka okukhulu kunye negalelo kubemi bezandla kunye namazwe aseNdiya.
Ngoko, Kuhamba Njani Ngoku kuHanford?
Isigaba sokuhlanjululwa kweHanford siya kuqhubekela phambili kude kube ngu-2030 xa ezininzi iinjongo ze-DOE zexesha elide ziza kudibana. Kuze kube ngoko, ukuhlanjululwa kuhamba ngenyameko, ngolunye usuku ngexesha.
Uphando nophuhliso lwezobuchwepheshe obunxulumene namandla kunye nokusingqongileyo ngoku belana ngokulinganayo kwinqanaba elilinganayo lomsebenzi.
Kule minyaka, i- US Congress ithathe imali (isetyenzisiwe) ngaphezulu kwee-13.1 yezigidi zemali kunye nokunika uncedo kummandla waseHanford ukuxhasa iiprojekthi ezenzelwe ukwakhiwa koqoqosho lwendawo, ukwahlukana kwabasebenzi, nokulungiselela ukunciphisa ukubandakanyeka kwintlangano indawo.
Ukususela ngo-1942, uRhulumente wase-US ukhona kwiHanford. Ekupheleni konyaka ka-1994, abahlali abangaphezu kwe-19,000 babengabasebenzi baseburhulumenteni okanye ama-23 ekhulwini labasebenzi bendawo. Kwaye, ngokwenene ngokwenene, inhlekelele eyingozi yintlekele yaba yinto ebangela ukuba kukhule, mhlawumbi nokuphila, kwindawo yaseHanford.
Ukupasa kweMntla-ntshona kwiNorthern Canada
Uhlobo lweeNkcubeko zaseNtshonalanga zaseUnited States kunye neNgciniso yeMephu